မြင်းတိုက် Camp အမှတ်တရများ
အမည်နာမကိုနေ့နာမ်တွေနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မည့်နာမည်များကို ဗေဒင်ဆရာများဘုန်းကြီးများမှတစ်ဆင့်မှည့်ခေါ် လေ့ရှိပါသည်။
ကျနော့်နာမည်ကိုလည်း အဖေနှင့်အမေတို့ကိုးကွယ်သောဘုန်းကြီးမှ ရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ထဲမှာ ကျောင်းမှတ်ပုံတင်ထဲမှာ ကျနော့်နာမည်သည် မောင်ဖေသက်ကြိုင်ဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာအရပ်မြင့်မြင့်ခြေတံလက်တံကရှည်ရှည်၊အသားကဖြူဖြူဆိုတော့ အလိုလိုနေရင်းမောင်ဖေသက်ကြိုင်နာ မည်ပျောက်သွားပြီးဗျိုင်းဘ၀ရောက်ခဲ့ရပါသည်။တောင်ငူသားကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းအားလုံးက ဗျိုင်း ဟုခေါ်ကြပါသည်။
ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့လိုက်ဖက်သောကြောင့် ကျနော်ဘာမှမပြောပါ။ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေကျနော့်အိမ်မှာ ကျနော့်ကိုဗျိုင်းလို့ခေါ်ရင်တော့အမေ အရမ်းစိတ်ဆိုးပါသည်။ကျနော့်အိမ်မှာကျနော့်ကိုဗျိုင်းလို့ဘယ်သူမှမခေါ်ရဲကြတော့ပါ။
အမှတ်မှီရင်တိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရသည်။ကျနော့်ရုပ်နှင့်နာမ်ဘယ်လောက်လိုက်ဖက်လဲမသိပါ။ ဘူမိဗေဒရောက်ပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာအားလုံးက တိုင်ပင်ထားသကဲ့သို့ ဗျိုင်း လို့ခေါ်ကြပါသည်။ကျနော်တို့်ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်များတွင်သမိုင်းဟုခေါ်ကြသောလှိုင်နယ်မြေဘူမိဗေဒဌာန မှာတက်ခဲ့ရပါသည်။
..ငါလား……ငါက ……… နောက်တစ်နှစ်ပြန်နေရမယ်……
…ဘာဒုက္ခလည်း … ငါတော့…..စာမေးပွဲကျတာကိုပျော်တယ်…….
ရင်းသွားကြည့်ခိုင်းပါသည်။ကျနော်နာမည်ရှာမတွေ့ပါ။ကျောင်းလခအကြွေးကျန်နေသလားလို့ကျောင်းသားရေးရာမှာအကြွေး သွားပြန်စစ်နေပါသည်။အောင်စာရင်းမှာကျနော့်နာမည်ဘယ်ပါမလဲ။စာမေးပွဲကျနေတာကိုကျနော်ဘဲသိသေးသည်။ကျနော်စာမေးပွဲကျတယ်လို့ အကြောင်းကြားလာပါတယ်။စာမေးပွဲကျလို့စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံနှင့်အခန်းထဲကမထွက်တော့ပါ။အမေနှင့်အမ ကျနော့်ကိုချော့ပြီးထမင်းစား ခိုင်းပါသည်။အောင်စာရင်းမှာကျနော့်နာမည်ဘယ်ပါမလဲ။စာမေးပွဲကျနေတာကိုကျနော်ဘဲသိသေးသည်။ကျနော်စာမေးပွဲကျတယ်လို့ အကြောင်းကြား လာပါတယ်။စာမေးပွဲကျလို့စိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံနှင့်အခန်းထဲကမထွက်တော့ပါ။အမေနှင့်အမ ကျနော့်ကိုချော့ပြီးထမင်း စားခိုင်းပါသည်။
ပထမဆုံး ကျနော့်ကို Field အတူဆင်းခဲ့သော ဘိုးတော် ပြဿနာလာရှာပါသည်။
ဘိုးတော်အင်္ဂလိပ်စာကိုအရမ်းပိုင်သလို Talking လည်းတော်တော်ကောင်းပါသည်။ဘိုးတော်ဒုတိယနှစ်အောင်သောနှစ်(4 နှစ်မြောက်)မှာ
တစ်ညလုံးမအိပ်ဘဲစပေါ့ရိုက်ထားသောစာများကိုပေတံပေါ်သို့ခဲတံချွန်ချွန်နှင့် Copy တင်ပေးလေ့ရှိပါသည်။
တောကျီးကန်းနှင့်ဘိုးတော်နောက်မှလိုက်ခဲ့မည်။ စားပွဲပေါ်မှာပေတံတစ်ချောင်းမှမတွေ့ကတည်းကဘိုးတော်ဝမ်းနည်းပက်လက်အခန်းထဲမှာငိုကြွေးနေသည်ဟုနောက်မှတော ကျီးကန်းကျနော့်ကို
တောကျီးကန်းအကြံပြုချက်အရမန္တလေးဆောင်သို့ချက်ချင်းလိုက်ပြီးပေတံလိုက်တောင်းရာ 10 ချောင်းလောက်ပြန်ရခဲ့ပါသည်။
ရခဲ့သော 10 ချောင်းပေါ်မှာ Micro copy များလည်းမထင်ရှားတော့ပါ။မမြင်ရတော့ပါ။
အဓိကသူ့ copy ပေတံတွေကိုကျနော်လျှောက်ပေးလိုက်၍သူစာမေးပွဲကျသည်ဟုအပြစ်တင်နေပါသည်။
သူပထမနှစ်မှာကတည်းက B.Ed Queen ဖြစ်သောမြိတ်သူမအေးကိုကြိုက်ခဲ့ပါသည်။
B .Ed Queen တစ်ယောက်ကိုကြိုက်တဲ့သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပါသည်။
ဒါပေမယ့်မအေးကသူ့ကိုတစ်ချိန်ချိန်ပြန်ချစ်လာမလားဆိုပြီး B.Ed ကိုသွားတော့သွားနေပါသည်။
အဖြေတစ်ခုခုတော့ရွေးထားပြီလို့ထင်ပါသည်။ Yes or No ဒါပါဘဲ…ကျနော့်စိတ်ထင်တွေပြောနေတာပါ။တစ်ကယ်တော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်၍ကျနော့်မှာဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိပါ။ ကျနော်လိုဗျိုင်းကိုကြိုက်တဲ့သူမရှိသလို..ကျနော်လဲဘယ်သူ့ကိုကြိုက်ရမှန်းမသိပါ…….
တောင်ငူဆောင် E မေဂျာမှာလာတက်နေသော ဇေယျဝတီကအရောင်တူသောတောကျီးကန်းမနဲ့
Repeaterဘ၀နှင့် တတိယနှစ်စာမေးပွဲဖြေပြီးသွားပါပြီ….စာမေးပွဲပြီးရင် Field ဆင်းရတော့မည်။
ထို့ကြောင့် Field ဆင်းပါက Repeater အားလုံးတစ်အုပ်စုထဲမှာရှိကြပါမည်။
Field ဆင်းကြသောဆရာ များတွင်ဆရာဖေနှင့်ဦးမင်းဆွေနှစ်ယောက်သည်အလွန်စမတ်ကျပါသည်။
ဆရာတို့ဝတ်ထားသောဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ Timberland Bootဖိနပ်များကိုကျနော်တို့အရမ်းသဘောကျပါသည်။
မြင်းတိုက် Camp သည်မြင်းတိုက်ဘူတာနောက်ကျောတောင်ကုန်းပေါ်ရှိအလုပ်သမားတန်းလျားကိုခေါ်ပါသည်။
ဥပမာကြာနီကန်ဆရာတော်လိုမျိုးတရား ဟောမလား၊ သူဟောတတ်သည်။
…..ဟေ့ကောင်ဘုန်းးကြီး…အရက်ဟာ ဒုစရိုက် 10 ပါးထဲမှာမပါဘူး….အဲဒါမင်းသိရဲ့လား
သူလည်းနတ်ပြည်မှာ P.R ရနေပြီ……
ငါတို့ အုပ်စုထဲမှာဘုန်းကြီးပါနေလို့ ကွင်းမဆင်းခင် တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက် သွားပြီးဗုဓ္ဒ၀င်အကြောင်းသွား
အိပ်၍အရမ်းကောင်းပါသည်။သို့သော်ကျနော့်ဘေးမှာအိပ်သောဘုန်းကြီးသည်နံနက်5နာရီထိုးအိပ်ရာကထပြီး
နံက်5နာရီဘုရားမရှိခိုးရအောင်ဘယ်လိုပြောခိုင်းရင်ကောင်းမလဲလို့ကျနော်နဲ့ကျီးကန်းထိုင်စဉ်းစားကြပါသည်။
တစ်ည Field ကအပြန်ရွာထဲဖြတ်လျှောက်လာစဉ်ခင်နေသောရွာသားတစ်ဦးယုန်သားဟင်းချက်ထားသည်။
ဟေ့…ကောင် ဂန်ဂါး မင်းမရိုးသားဘူး ငါသိတယ်နော်….ကျနော်ကခပ်တည်တည်နဲ့ဟောက်တော့….
မနက်5နာရီ အိပ်ရာထလေ့ရှိသည်။
…..ဘုန်းကြီးအိပ်တော့ကွာ….မနက် Field ဆင်းရအုံးမယ်…….
ဒီနေ့မနက်5နာရီထပြီးဘုရားမရှိခိုးနိုင်တော့ပါ။
Individual Field ဆင်းနေစဉ်အတောအတွင်းတညနေဗိုက်တွေလည်းဆာနေကြပါသည်။
ဒါပေမယ့်ရွာသား များ၏မျက်နှာပေါ်မှာကျနော်တို့အပေါ်လှိုက်လှဲပျူငှာစွာဖိတ်ခေါ်နေသော သဏ္ဍန်တွေ့ရပါသည်။
ထပ်အသံပေးလိုက်တော့ 8 နှစ်9နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ထွက်လာပါသည်။
စိတ်ညစ်ရပြီ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ Camp ပြန်ရမည့်ပုံပေါ်နေပြီ……..
မထူးပါဘူး…ကြက်သားဟင်းနဲ့ထမင်းတီးပြီးတော့မှ Camp ပြန်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်……
ဂေါ်ရခါးမိသားစုနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့6နာရီထိုးတော့မည်။
ကျနော်တို့Camp ပြန်ရောက်တော့ ည 7း00 ကျော်နေပြီ…..ဆရာဖေကျနော်တို့အုပ်စုကိုစိတ်ပူပြီးရွာထိပ်မှာ ထွက်စောင့်နေပါသည်။ မိဘနဲ့သားသမီးမေတ္တာ၊ဆရာတပည့်အပေါ်ထားသောမေတ္တာအတူတူပါလားလို့ကျနော်နားလည်လိုက်ပါသည်။
တစ်နှစ်တစ်ခါဖဲကိုင်နေရရင်ပျော်နေတဲ့ ပုံတွေ……တစ်ရက်ညစာစားပြီး Camp ရှေ့မှာထိုင်နေကြစဉ်.....
မနက်ဖြန် Field အမှီပြန်ပို့ပေးမည်။လိုက်ချင်သောကျောင်းသားများလည်းလိုက်ခဲ့နိုင်သည်။
ကျနော်နဲ့ကျီးကန်း ကစားဝိုင်းမှ 12 နာရီလောက်မှာပြန်ခဲ့ကြပါသည်။ပြန်ရောက်တော့ရှကီးအိပ်ပျော်နေပြီ……..
ဓမ္မာရုံကြီးထဲမှာမနက်ဖြန်မနက်5နာရီ ကျောင်းထိုင်တရားဟောရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါသည်။
ယောနိန္ဒိယံ ပသံ သတိ
တံဝါ နိန္ဒတိယော ပသံသိယော
၀ိဓိနာတိ မုခေန သောကလိံ
ကလိန တေန သုခံ န၀ိန္ဒတိ
ဒီနေ့ကျနော်တို့အုပ်စု Field တ စ်ရက်နားသည်။Camp မှာနေရင်းမြေပုံကြမ်း၊စာတမ်းနမူနာရေးကြမည်၊
ကိုစံမြကြက်က လူတွေနဲ့ယဉ် ပါးနေပါပြီ……
လူတွေကိုမေတ္တာမပို့နဲ့…..ငါတို့အုပ်စု Grade ကောင်းကောင်း ရအောင်ဆုတောင်းပေးစမ်းပါ။
ကျနော်တို့ Individual field ဆင်းသောဧရိယာသည်ကလောမြို့အနားရောက်နေပြီ……
မြင်းတိုက် Camp ရောက်တာ ရက် 20 ကျော်နေပြီ…..
…..ဟေ့ကောင် ဗျိုင်း …ဘာလို့ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုမ၀င်လာတာလဲ…..
ငါသောက်တဲ့အရက်ဟာဒုစရိုက် 10 ပါးထဲမှာမပါဘူးကွ……..
31 ဘုံသားအားလုံးကိုနိဗ္ဗာန်ပို့ပေးမယ့်မဂ္ဂင်ယာဉ်ယူလာပြီ…….ဘယ်မှာလဲ မဂ္ဂင်ယာဉ် ……
မဂ္ဂင်ယာဉ်ကိုစီးပြီးငါတို့အားလုံးနတ်ပြည်ကို Go ကြမယ်….
လောလောဆယ်ငါတို့ဟာ Field စည်းကမ်းချိုးဖေါက်ထားလို့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေပြီ……ဒီအထဲမှာတစ်ယောက်မှသူတော်ကောင်းမပါဘူး……
ကြိုသိနေပေမယ့်လည်းတစ်ကယ်တန်းသေကွဲ ကွဲ ပြီဆိုတော့လည်းလူ့ဘ၀မှာရစ်တွယ်ခဲ့တဲ့သံယောဇဉ်တွေကြောင့်
အဒ္ဓုဝံ မေ ဇီဝိတံ
ဓုဝံ မေ မရဏံ
မရဏန္တံ ဟိ ဇီဝိတံ